Taanso iyo qaanso lagu xardho | Tattoo
Jaangooyooyinka qaanso iyo fallaadho, oo diiradda lagu saaray fanka iyo hal-abuurka
Nat Cerezo | 28/09/2021 12:16 | La cusbooneysiiyay 28/09/2021 12:37 | Waxyaabaha iyo waxyaabaha loo yaqaan 'tattoos'
Xarrago leh, fudud oo qurux badan. Sidan ayaa ah sida loo qoro qaansada iyo falaarta. Galabnimadan Axadda ah waxaan Tatuantes idiinku soo xuli doonaa xulashada nuucaan oo kale ah oo caan ku noqday sannadihii la soo dhaafay.
Waa sidaas sida aan nidhaahno, fududayntiisa iyo sidoo kale nadaafadda naqshadeynta ayaa ka mid ah astaamaha ugu waaweyn taas oo horseeday in ay ku faafiyaan noocyadan tattoo -ka maqaarka badan. Hadda, maxay ula jeedaan? Waxaan ka wada hadalnaa xagga hoose.
1 Macnaha tattoos -ka qaansada iyo falaarta
1.1 Macnaha tattoos -ka falaarta
1.2 Macnaha tattoos qaanso
1.3 Macnaha qaansada iyo fallaarta wada
2 Sida ugu badan ee looga faa'ideysto tattoo -ga hubkan
3 Sawirada Tattoos Qaansada iyo Fallaarta
Macnaha tattoos -ka qaansada iyo falaarta
Tattoos -ka leh qaansooyinka iyo fallaadhaha ayaa leh macno aad u yar waxay ku xiran tahay haddii tattoo -ga uu matalo kaliya fallaadh, qaanso, ama labadaba.
Macnaha tattoos -ka falaarta
Tani waa mawduuc adag, tan iyo macnaha tattoos fallaadhu way ku kala duwanaan kartaa iyadoo ku salaysan arrimo badan. Tusaale ahaan, waxay ahayd aalad dad badani isticmaalaan qarniyo badan si ay u ugaadhsadaan oo isu difaacaan, sida Dhaladka Maraykanka.
Si kastaba ha noqotee, waxaan u falanqayn doonnaa qaar si aad ugu caddaato macnaha ujeedka ah ee waxa aad tattoo -ga doonayso (waxaan dhahnaa "ujeedo" maxaa yeelay aakhirka waxa muhiimka ah waa macnaha uu tattoo kuu leeyahay oo aan ahayn inta kale).
Una fallaadha kali ahi wuxuu tilmaami karaa inaad ka mid tahay kuwa raaca jidkaaga. Inaadan dan ka lahayn waxa dadka kale u maleeyaan iyo inaad raacdo waddada fallaartaadu tilmaamayso, wax la mid ah jiheeyaha, oo weliba waxay badanaa tilmaamaysaa inaad hami leedahay ama aad ka go'antahay yoolkaaga. Dhinaca kale, waxay kaloo noqon kartaa astaan ​​ilaalin, taasoo muujinaysa inaadan raadineyn iska horimaad laakiin aad diyaar u tahay inaad isdifaacdo haddii loo baahdo.
Sidoo kale, Fallaadh badhkeed loo kala jaray ayaa loo isticmaali jiray in lagu muujiyo in dhammaadkii khilaafkii la gaadhay ama aad doonayso inaad aasto. Waxaa inta badan lala xiriiriyaa astaanta nabadda. Tattoo -ga dhexdiisa, waxay astaan ​​u noqon kartaa ka gudubka xilliga dhibka badan.
Marka laga hadlayo labo fallaadhood oo is -dhaafsan, badanaa waxay la xiriirtaa saaxiibtinimo. Marar badan tattoo -kan waxaa lagu samayn karaa qof kale sida tattoos mataano ah, si loo muujiyo heerka ballanqaadka ka dhexeeya labada qof. In kastoo ay haa tahay, maanka ku hay in haddii fallaadhuhu ay tilmaamayaan jihooyin ka soo horjeeda macnaheedu waa in khilaaf jiro.
Ugu dambayn, yaa aan garan fallaadhaha Cupid? Waa hagaag, waxay noqon kartaa sabab kale oo loogu talagalay tattoo. Oo kara oo astaan ​​u ah fallaad ka gudubta wadnaha. Ama waxaa xitaa lagu tilmaami karaa sida fallaadh caarad ama baal u qaabeysan sida wadnaha.
Macnaha tattoos qaanso
Si xiiso leh, Si ka duwan sida shukumaanada falaarta, way adag tahay in la helo tattoos oo hal qaanso oo kaliya ka soo baxdo. Badanaa waxaa la socda hal ama in ka badan oo fallaadho ah, maadaama qaansada lafteedu ay tahay aalad ka madhan dhammaan adeegsiga fallaadhihii.
Hal suurtagal ayaa ah Tattoo -ga qaansada waxaa loo samayn karaa sida kiiska fallaadhaha la gooyay iyo inay tahay tattoo dhammaystiran. Waa fikrad aad u fiican lamaanaha, midna wuxuu ku xardhaa qaansada kan kalena wuxuu ku sawiraa fallaarta. Sida la qiyaasi karo, waxay leedahay macne la mid ah wixii aan soo sheegnay ee ku saabsanaa fallaadhaha is -weydaarsaday, maadaama ay tilmaamayso in labadoodu ay wada xoog badan yihiin.
Macnaha qaansada iyo fallaarta wada
Halka lafteeda Tattoo -yada qaansada iyo fallaarta ma laha macne gaar ahFallaadhaha iyo qaansooyinka labadaba waxay si toos ah ula xiriiraan astaanta zodiac ee Sagittarius.
Sidoo kale, iyadoo ku xiran habka loo soo saaro, the macnaha fallaaraha iyo qaansooyinku waxay la xiriiri karaan adduunka fanka labadaba sida hal -abuurka iyada oo sidoo kale la ilaalinayo xiriirka adduunyada awoowayaasha.
Waana sidoo kale Waxay astaan ​​u yihiin dagaal iyo boqortooyadii dhexe. Dhinaca kale, qaansoleydu waxay leeyihiin macne la xiriira ilaalinta. Gaar ahaan, ilaalinta uu bixiyo qaansoole waqtiyadii hore geedka gadaashiis ama ku qarsoon duurka.
Sidoo kale waxaan leenahay dhowr macne oo la xiriira xaaladda qaansada iyo falaarta. Tusaale ahaan, qaanso qaanso leh oo leh fallaadho xambaarsan waxay tilmaami kartaa xoogaa xiisad ah oo ku wajahan cunsur, waana sababta tattoo -kan caadi ahaan ula socdo waxa soo saara dareenkan. Tusaale ahaan, haddii aan nahay cadow geerida broccoli waxaan lahaan lahayn qaansada oo lagu raro fallaad tilmaamaysa qudaarkan.
Dhinaca kale, haddii fallaarta la toogtay waxay leedahay macne ka soo horjeedaIn xiisaddii meesha ka baxday oo aan hadda raaci karno fallaartaas noo calaamadsan waddada. Waxay yeelan kartaa macne la mid ah fallaadhaha keli -taliska ah, kaas oo aan raacno soo jeedintiisa.
Ugu dambeyntiina, waxaa jira kuwa ku daraya qaansoley ama qaansoole tattoo, taas oo horeyba u jirtay kuma tilmaamno qaansada iyo fallaarta ee waxaan ku aqoonsannaa qofka sidda. Sidii aan hore u soo sheegnay, qaansoole wuxuu la xiriiraa ilaalin waana taas waxa laga fahmi karo tattookan.
Sida ugu badan ee looga faa'ideysto tattoo -ga hubkan
Sida aan caadiyan u sheegno xadka waa mala awaalkaaga, waad awoodaa kala hadal farshaxankaaga tattoo -ga si aad uga faa'iidaysato fikraddaada. Oo hadda waxaan siin doonaa mawduuca xoogaa meerayaal ah.
Caadiyan Tattoo -yada qaansada iyo fallaadhu waxay u muuqdaan inay leeyihiin qaab aad u yar oo cabbir ahaan yar (in kasta oo mar walba laga reebo). Tirooyinka joometeriga sida wareegyada, rhombus -ka, leydileerka, oval -ka iyo afargeesyada ayaa guud ahaan loo adeegsadaa in lagu siiyo taabasho fudud. Waxa kale oo jira kuwa ku dara taabasho dabiici ah oo dheeraad ah iyaga oo ku daraya ivy xadhigga xadhigga ama xitaa caleemaha fallaarta.
Waxa kale oo jira kuwa doorta sii taabashada gaarka ah adiga oo adeegsanaya fallaarta falaarta si aad u qorto eray, sida magaca qaraabada, ama calaamad aad isku aqoonsato ama aad jeceshahay.
Sida aan faallay waxa kale oo ay fikrad fiican u noqon kartaa tattoos dhammaystiran. Mid baa qaansada ku qori kara kan kalena falaarta. Waxaan xitaa soo aragnay mid uu mid walba ku helo nus ka mid ah falaarta. Waxa kale oo jira ikhtiyaar ah in la sameeyo fallaadhaha is -dhaafsan sida tattoo -mataano ah, si loo matalo saaxiibtinnimo wanaagsan.
In tattoos -ka uu qaansoolaha soo baxo waxaan leenahay dhawr fursadood. In qaansoolehu yahay malaa'ig aan ku heli doonno ilaalin rabbaani ah. Waxay kaloo noqon kartaa Dhalad Ameerikaan ah ama Amazon, oo iyaduna u adeegi doonta inay soo dhoweyso qaybteenna dheddigga ah.
Shaki la'aan, Tattoo -ga qaansada iyo fallaadhu waxay leeyihiin macno iyo suurogalnimo fara badan, waxayna ku habboon yihiin tattoo fudud. Noo sheeg, ma leedahay wax ka mid ah waxyaabahan oo la xardhay? Maxay kaaga jeedaan? Waa sidee tattoo -gaagu?
Sawirada Tattoos Qaansada iyo Fallaarta
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Waxyaabaha iyo waxyaabaha loo yaqaan 'tattoos' » Jaangooyooyinka qaanso iyo fallaadho, oo diiradda lagu saaray fanka iyo hal-abuurka